Mogadishu Journal » 2018 » April » 30
Madaxweynaha Soomaaliya oo hambalyo u diray guddoomiyaha cusub ee Baarlamaanka
Mjournal : -Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hambalyo u diray Guddoomiyaha cusub ee loo doortay Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan. Madaxweyne Farmaajo ayaa ku ammaanay Guddoonkii KMG ahaa ee Golaha...
Baarlamaanka Soomaaliya oo doortay Gudoomiye
Mjournal :-Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta doortay Gudoomiyaha Baarlamaanka Hoggaamin doona Saddexda Sano ee socota ka dib Doorasho ka dhacday Magaalada Muqdisho. Wareegii ugu dambeeyay ee doorashadda ayaa waxaa ku tartamaayay musharaxiinta kala ah Ibraahim...
Qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Kabul
Mjournal :-Ugu yaraan 21-Qof oo ay ku jiraan 4-Wariyeyaal ah ayaa ku geeriyooday halka daraasiin kale ay ku dhaawacmeen ka dib labo Qarax oo is xig xigay oo ka dhacay magaalada Kapul ee caasimadda dalka Afgaanistaan,sida ay sheegeen Saraakiisha Caafimaadka dalkaasi. Qaraxyada...
Wareegii koowaad ee doorashada oo la soo gabagabeeyay
Mjournal :-Waxaa goordhaw soo dhamaatay tirinta codadka wareega koobaad ee Doorashada Gudoomiyaha golaha Shacabka , waxaana wareega koobaad ku tartamayay 10-Musharax. Tirinta codadka oo goordhaw soo dhamaatay waxaa hogaaminaya Musharax Maxamed Mursal Shekh Cabdiraxman oo helay...
Doorashada guddoonka Baarlamaanka oo bilaabatay
Mjournal :-Waxaa goordhaw xarunta Golaha Shacabka ee magaalada Muqdisho ka bilaabatay doorashada Gudoomiyaha golaha Shacabka, waxaana kursigan ku tartamaya 11-Musharax. Xildhibaanada ayaa maanta si rasmi ah u dooran doona Gudoomiyaha Golaha Shacabka kadib is casilaadii...
Xildhibaannada Baarlamaanka oo maanta dooranaya guddoomiyaha Golaha Shacabka
Mjournal :-Sida uu qorshaha yahay waxaa maanta oo Isniin ah Magaalada Muqdisho ka dhaceysa Doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka Golaha Shacabka oo ay u tartamayaan ilaa 11 Musharax. Musharaxaiinta xilkan u tartameysa ayaa waxa ay kala yihiin Ibraahim Isaaq Yarow, C/casiis Xasan...